I-Alarm ne-Burglar Alarm Systems - I-FuturEnergy
I-alamu kanye nezinhlelo zokulwa nobusela
I-FuturEnergy icabanga ngokuphepha kwakho
La i-protezione futhi i ukuvikeleka yekhaya lakho noma inkampani, kungenye yezinkinga ezinkulu eziholela izigidi zabantu ukuthi bazihlomise ngokuhle kakhulu Ukufaka di alamu e Izinhlelo zokulwa nobusela. Ikusasa inikeza amadivaysi amasha kakhulu emkhakheni ngamanani angenakubekezelelwa: alamu wokungenela, ama-alamu axhunywe kwizikhungo ezisebenza amahora angama-24 ngosuku futhi athuthukile izinhlelo ukubhekwa kwevidiyo.
le ama-alamu wokugqekeza ikhaya elihlongozwe yiFururEnergy bazijwayela kuyo yonke imvelo nayo yonke imfuno. THE anti-theft amadivaysi atholakalayo anezici ezithuthukile ezahlukahluka ngohlobo lwekhaya noma lesakhiwo okufanele lifakwe kuso. Zisebenza, ngokwesibonelo, ngokusebenzisa ukuqinisekiswa kwezithombe, ngokusebenzisa ukutholwa kokungenelela, yamukela isenzo esisheshayo nesiphumelelayo kunoma yisiphi isimo esiphuthumayo. Yonke indlu nayo yonke imvelo yebhizinisi yehlukile futhi, ngenxa yalokho, idinga izindlela ezithile zokuqinisekisa ukuvikelwa okungcono uma kwenzeka ukweba noma ezinye izinsongo.
Kulabo abafuna ukuvikela izindawo zabo, umndeni noma ibhizinisi, sinikezela izinhlelo ze-alamu ethize nokwesekwa ochwepheshe bezokuphepha ozoncoma i uhlelo lokulwa nokweba noma ka ukubhekwa kwevidiyo zilungele kangcono izidingo zakho.
Izinhlelo zokubhekwa kwevidiyo
Ukuqonda ukuthi yiziphi izidingo zakho ukuvikeleka, udinga ukukwenzahlaziya ikhaya lakho noma ibhizinisi lakho nesazi. Ochwepheshe bethu bazohlola bonke ubuthakathaka besakhiwo, ngaphakathi nangaphandle. Futhi ngalesi sikhathi uzokwelulekwa ngaso uhlelo lwe-alamu iklanyelwe. I Izinhlelo zokubhekwa kwevidiyo okuhlongozwe ngu Ikusasangokwesibonelo, bazokuvumela ukuthi uphile impilo yakho yansuku zonke ekhaya ngokuthula okuphelele. Futhi bayakwazi ukuqinisekisa ukusebenza kahle ngokulinganayo ukuphepha kwezinkampani namabhizinisi. Uma isela lizama ukungena esakhiweni, uma kwenzeka ingozi yasekhaya noma yasemsebenzini, ingozi kanye nesimo esiphuthumayo sizophathwa ngomunye wethu ochwepheshe bezokuphepha exhunywe yi-Operations Center ngendlela esifike ngesikhathi.
Amabhizinisi aphumelelayo anezinto eziningi ezifanayo, namuhla sizobheka inethiwekhi enkulu yokukhangisa ye-'R'of enkulu ingasiza.
Ukuqashelwa kungafanekiswa ngabantu ababili abangena egumbini elinabantu abaningi ephathini.
Izinhlelo zokulwa nobusela
le I-Burglar bayizinhlelo ze-elekthronikhi anti-ukungenelela ongathembela kubuchwepheshe obuhlukile. Ezivame kakhulu yilezi Ama-alamu we-burglar angenantambo evumela ukufakwa okulula kanye nesikhala sokungafanele ukwenza umsebenzi wobumbuso esakhiweni esizofakelwa kuso.
Bese kuba khona Ukutholwa kwenkungu yokuphepha: lapho bebona ukungenelela, bakhipha inkungu eminyene futhi engangeneki evimba isela ukuba lingaboni ngaphakathi kwemvelo lapho likhona. Lapho inkungu ekhiqizwe nguUkuvikelwa Kokweba iminyene kangangokuba ivimbela noma ngubani ukuthi angakwazi ukuyibona. Eqinisweni, ngeke kwenzeke ukuthi isela livimbele ukuvikela komuntu ukuphepha kwenkungu ye-alamu futhi lokhu kuzonikeza isikhathi esiningi sokuqwashisa ukusebenza komthetho.
Owethu Ochwepheshe bezokuphepha banamakhono athuthukile nesipiliyoni esiqinile. Ngakho-ke, ngiyakwazi ukuncoma kumsebenzisi ngamunye uhlobo lwe I-alamu noma i-alamu ye-burglar efaneleke kakhulu. Osomabhizinisi, izinkampani kanye nabanikazi be Ibhizinisi abafuna ukuvikela umsebenzi wabo kanye nabasebenzi babo, sinikezela izitshalo di Ama-alamu ahlanganisiwe e Izinhlelo zokulwa nokungenelela ukuthi wazise ngesikhathi sangempela noma ikuphi ikhefu-in. Kulabo abafuna ukuvikela imindeni yabo namakhaya abo, sinikezela izinhlelo ze-alamu ethize nokwesekwa ochwepheshe bezokuphepha ozoncoma i uhlelo lokulwa nokweba noma ka ukubhekwa kwevidiyo zilungele kangcono izidingo zakho.
Ukuhlaziywa kwezindawo ezizofakwa kuzo ukuvikeleka, ukukalwa kwezikhala zangaphakathi nangaphandle nemingcele: ochwepheshe bethu bokuvikela bahlaziya lezi zici nabanye abaningi ngaphambi kokunquma ukuthi iyiphiUhlelo lwe-alamu isebenza kahle futhi ilungele izidingo zakho zokuvikela.